September 23, 2020 267
दश हप्ताभन्दा लामो स’मयको पी’डापछि जार्काले आशा’को एउटा किरण देखिन्। “म खुसी छु। मेरो नाक फेरि बन्यो…” उनको अनुहार फेरि राम्रो देखिने बनाउने शल्य’क्रिया गरिएपछि उनले चिकित्सक’हरूलाई भनिन्। हातमा बोके’को ऐनामा उनले टाँ’का र र’गतका टा’टाले ढाकेको ना’क देखिन्।
अफगानिस्तान’मा महिला’विरुद्ध व्यापक रू’पमा घरेलु हिं सा हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ले उद्धरण गरेको एउटा राष्ट्रिय सर्वे’क्षणमा ८७% महिला’ले कुनै न कुनै रूपमा शारीरिक, यौ निक वा मान’सिक घरेलु हिं सा भोगे’का हुन्छन्।
पति वा परिवार’का पुरुष सदस्यले कहिले’काहीँ महिला’माथि ते जाब वा ह तियार प्र हार पनि गर्छन्। यो घट’नामा पतिले जार्का’लाई आ क्रमण गरी च क्कुले ना’क का’टिदिएका थिए।
“मेरा पति जस’लाई पनि शङ्का गर्थे,” उनी भन्छिन्। आ’रोप र कु’टपि’ट त उनका लागि नित्य’कर्मजस्तै भएको थियो। “उनले मला’ई चरित्र’हीन भएको आ’रोप लगाए। मैले त्यो अ’सत्य हो भनेँ,” उनले भनिन्।
उनीहरू’को बिहे भएको १० वर्ष भयो। छ वर्ष’को एउटा छोरा पनि छ। अट्ठाइस वर्षीया जार्का’लाई कु’टपि’ट नौलो लाग्दैनथ्यो, तर यस्तो स्थिति पनि आउला भन्ने उनले कहिल्यै कल्पना गरेकी थिइ’नन्। “आज ऐनामा हेर्दा नाक निकै नि’को भएको रहेछ,” जार्काले बीबी’सीसँग भनिन्।
डा. जाल्माइ खान अह’मदजाईले निःशुल्क शल्य’क्रिया र अन्य उप’चार गरिदिए “शल्य’क्रियाअघि म नराम्री देखिन्थेँ,” उनले भनिन्। उनको उपचार’मा संलग्न चिकित्सकह’रू पनि उनको अवस्था’मा देखिएको सुधार’प्रति खुसी छन्।
“उनको शल्य’क्रिया राम्रो सँग भयो। सङ्क्र’मण पनि छैन…,” डा. जाल्माइ खान अहमदजाईले भने। काबुल’बाट झन्डै २५० किलोमिटर दक्षिणमा पाकिस्तानसँगको सीमानजिकै एउटा दुर्गम स्थान’मा जार्का’को परिवार बस्छ। उनको परि’वार धेरै गरिब छ। उनी निरक्षर छिन्।
उनको प्रान्तमा तालि’बानको नियन्त्रण छ। स्थानीय नेता र ल’डाकुहरूले समन्वय भएपछि बल्ल उनी उप’चार गर्न काबुल जान पाइन्। त्यो बेला डा. जाल्माइ’लाई कोरोना’भाइरस सङ्क्र’मण भएको थियो।
पत्नीको मृ त्यु भएकाले ती ४९ वर्षीय चि’कित्सक उनको अन्तिम संस्का’र गरेर भर्खर काबुल फर्किएका थिए। “आउँदा उनको स्थिति न’राम्रो थियो। उनको नाक नराम्ररी सङ्क्र’मित थियो,” उनी भन्छन्।
अमेरिकाले धुइँ’पत्ताल खोज्थ्यो, तालि’बान नेता ओमार अमेरिकी सै’निक इलाका’नजिकै बस्थे’जुन १५ मा परी’क्षण गरेर उनले केही औषधि दिए। पाँच हप्ता’पछि जार्का फेरि का’बुल आइन्। उनको जुलाई २१ मा शल्य’क्रिया भयो। जार्काले बीबीसी’लाई फिल्मा’ङ्कन गर्ने अनुमति दिइन् तथा आफूले भोगे’को घरेलु हिं साबारे कुरा’कानी गरिन्।
उनका अनुसार पति पनि उनकै उमेर’का छन् र अरूको बस्तुभाउ हेरेर जीविको’पार्जन गर्छन्।”बाल्यकालमै मेरा काकाले उनी’सँग बिहेको कुरा पक्का गरिदिएका थिए। म निकै सानी थिएँ, मलाई जीवन र बिहेबारे केही थाहा थिएन।”
“मलाई त्यति बेला म कति वर्षकी थिएँ भन्ने पनि थाहा छैन,” उनी भन्छिन्। उन’लाई कसैले बिहे गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधे’को सम्झना पनि छैन।
वर्षौँपछि आफ्नो बिहे साटोमा भएको उनले थाहा पाइन्। आफ्ना पतिकी एक बहिनी उनका काका’ले बिहे गरेका रहेछन्। जार्काका अनु’सार उनका पतिले उनलाई सधैँ कु’टपि’ट गर्थे “मेरा काकाले बेहु’लीका लागि पैसा तिर्न नस’केकाले मलाई दिएका रहेछन्,” उनी भन्छिन्।
अफगानिस्तानमा बेहुली पक्ष’लाई पैसा दिने चलन छ। अवैध भए पनि यो परम्परा अझै व्यापक छ। बिहेपछि आफ्ना पतिले उनका दिदीब’हिनीलाई पनि पि’ट्ने गरेको उनले थाहा पाइन्।
तर उनलाई कारण थाहा छैन। बिहे भएको एक वर्षमै उनका पति फेरि अर्को बिहे गर्न चाहन्थे। अफगा’निस्तानमा बहु”विवाह सामान्य मानिन्छ। तर बेहुली पक्षलाई दिन उनी’सँग पर्याप्त पैसा थिएन। त्यो निराशा र आ’क्रोशको तारो जार्का बनिन्।
“उनी मलाई पि’ट्थे र म ज्या’न जाने ड’रमा हुन्थेँ,” उनले भनिन्। गत मे महिनामा उनी भागेर माइत गइन् अनि पितालाई छुट्याइ’दिन आग्रह गरिन्। उनलाई खोज्दै पति आइ’पुगे।
जार्काको घा’उ चाँडै निको भइरहेको चिकित्सक’हरू बताउँछन् “एक रातपछि उनी ठूलो च क्कु बोकेर बिहानै मेरो माइती आइ’पुगे। मलाई फिर्ता गरिदि’न उनले मेरा बुवा’लाई आग्रह गरे। बुवा र मेरा काकाका छोराले उनले जमानी नल्याए’सम्म मलाई फिर्ता नप’ठाउने बताए।”
उनका पतिले मेरो सुरक्षा’को प्रत्या’भूति दिने जमानी’हरू ल्याए। तर घर फर्किएपछि अवस्था बिग्रि’यो। “माइतबाट फर्किए’पछि उनले मलाई फेरि कु’टे अनि च’क्कु लिएर हि’र्काए,” उनले भनिन्, “उनले मेरो नाक का’टिदि’ने ध’म्की दिएप’छी म छिमेकी’को घरतिर भागेँ।”
छिमेकीहरूले हस्त’क्षेप गरे, तर त्यो क्षणिक मुक्ति थियो। “उनले मलाई माइत लगिदिन्छु भन्दै घरबाट निकाले,” उनी भन्छिन्। तर त्यो त उनको जाल रहेछ। उन’लाई अर्को घरमा लगेर बगैँचा’मा लघारे। जार्का’का अनुसार त्यति बेला उनका पतिले ब’न्दुक पनि बो’केका थिए।
“कहाँ भाग्छे’स् भनेर उनले मलाई समाते,” जार्काले भनिन्, “त्यहाँ एउटा सानो बगैँचा थियो, अनि उनले खल्तीबाट च क्कु निकालेर मेरो नाक का’टि’दिए।” बिनाअ’नुमति माइत गएर आफ्नो बे’इज्जती गरदिएका’ले दण्ड’ दिएको उनको भनाइ थियो।
जार्कलाई र’गतको आहालमा छोडेर उनी गए। जार्काका पतिले उनलाई केही नगर्ने भन्दै माइत’बाट फर्का’एका थिए “एकदमै दु’खेको थियो र धेरै र’गत ब’गिरहेको थियो। मलाई सास फेर्न पनि गा’ह्रो भएको थियो,” जार्काले भनिन्।
उनी चि’च्याएको सुनेर छिमेकीहरू आए। एक जनाले का’टिएको ना’कको टु’क्रा भे’टे। उनलाई स्थानीय चिकित्स’ककहाँ लगियो। तर का’टिएको नाक जोड्न नमिल्ने बताइयो। जार्का’का पिता र माइती पक्षले प्रति’शोध लिन खोजे। तर उनका पति फेला परेनन्।
“उनीहरू रिसाए’का थिए। उनीहरूले उनलाई भेटे ज्या’न लिने ध’म्की दिइरहेका थिए,” जार्का सम्झिन्छिन्। “मेर बुवा र काकाहरूले उनका जमानीहरूको घरमा आ’गो लगाइदिए र उनीहरूलाई झ’पारे।” प्रह’रीले जार्काका पतिलाई समात्यो र जे’ल पठायो।
जार्काको माइती पक्ष उनका पतिला’ई दण्ड दिन चाहन्थ्यो जार्काको उपचार स्थानीय स्तरमा पर्याप्त थिएन। उन’लाई अनुहार पुनर्नि’र्माण गर्ने शल्यक्रि’याको आवश्यक थियो। र’क्ताम्मे अनुहार देखिने उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जा’लमा व्यापक रूपमा फैलि’एको थियो।
डा. जाल्माइले पनि त्यो देखे।उनले निःशुल्क उ’पचार गरिदिने घोषणा गरे। स्थानीय अधिकारीह’रूसँग सम्पर्क गरेर उनले जार्का’लाई काबुल आउने प्रबन्ध मिलाइदिए।
डा. जाल्माइ अहिले जार्काको स्वास्थ्यमा भएको प्रगति’को निगरानी गरिहेका छन्। आवश्यक पर्‍यो भने लेजर विधि’बाट थप उपचार गर्न वा सिलिकन इम्प्लान्ट गरिदिने विचारमा उनी छन्। सामान्यतया अहिले गरिएको उप’चारको उनी २००० अमेरिकी डलर शुल्क लिन्थे। जार्का’ले त्यो रकम तिर्नुपरेन।
उनलाई ती चिकित्स’कले ५०० डलर बरा’बरको औ’षधि पनि निःशुल्क दिए। जार्का अहिले आफ्नो छोराबारे चिन्ति’त छन्। ती छ वर्षीय बालक अहिले पनि उनका पतिको परिवार’सँग छन्। तर अहिले उन’लाई छोराको न्यास्रो लागेको छ
“मैले तीन महि’नादेखि मेरो छोरो मशूक’लाई देखेकी छैन। म उसलाई धेरै माया गर्छु। छोरो मसँगै होस् भन्ने चाहन्छु,” उनी भन्छिन्। आ’फूसँग भएको हिं’सा छोराले नदेखे’कोमा उनी खुसी छिन्। तर जार्काको कमाइ नभएकाले स्थानीय कानुन’ले उनको पति’लाई छोराको अभि’भावकत्व लिन दिन्छ।
छोरासँग छुट्टिनुपर्दा उनी दुःखी छिन्। “मलाई निकै न्यास्रो लाग्छ। खाने बेलामा म उन’लाई नै सम्झिन्छु,” उनी भन्छिन्। – विविसी बाट
Prevआजको डलरको भाउ सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ हेर्नुहोस्:
Nextलामो दुरीका रुटमा पनि बस चल्दै, यस्तो छ रुट
डि`भोर्स भएका स्मारिका र विवेकसँगै त्यो अन्तिम भिडियो (हेर्नु`स् भिडियो )
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132786)